“တွင်းနက်ထဲက စိန်ရိုင်းတုန်းကြီးတွေ “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “တွင်းနက်ထဲက စိန်ရိုင်းတုန်းကြီးတွေ “
“တွင်းနက်ထဲက စိန်ရိုင်းတုန်းကြီးတွေ “
Posted by pooch on Jun 18, 2011 in Creative Writing | 16 comments
တနေ့မှာ အာရပ်ကုန်သည်တစုဟာ ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လုပ်ဖို့ရာ အတွက် တစ်မြို့ ၀င် တစ်မြို့ထွက်
ခရီးသွားရင်း သဲကန္တာရ တခုကို ညကြီးမိုးချုပ် ဖြတ်သွားရပါတယ်တဲ့။ အဲဒီအချိန်မှာ မထင်မှတ်ပဲ သူတို့အုပ်စုထဲက လူတယောက်က အင်မတန်နက်တဲ့ တွင်းကြီးတတွင်းထဲကို ပြုတ်ကျသွားပါတယ်။ အဲဒီတွင်းကြီးထဲ မှာ အင်မတန် အဆိပ်ပြင်းတဲ့ မြွေဆိုးတွေက စောင့်ကြိုနေခဲ့ပါတယ်။ ညအမှောင်ထဲမှာဆို
တော့ မြွေမျက်လုံးကြီးတွေကလည်း တလက်လက်တောက်နေခဲ့ပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ တွင်းထဲက လူက သူ့လူတွေကို ဆင်းမလာခဲ့ဖို့ လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ ပြပါတယ်။ တတ်နိုင်သမျှ အသံကုန်ဟစ်ပြီးတော့လည်း ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တွင်းပေါ်က လူတွေရဲ့ အမြင်မှာတော့ ညအမှောင်ထဲမှာ တလက်လက်တောက်နေတဲ့ မြွေကြီးတွေရဲ့ မျက်လုံး တွေ ကို လက်လက်ထနေတဲ့
စိန်ရိုင်းတုန်းကြီးတွေလို့ မြင်ပါတယ်။ သူတို့အထင်မှာတော့ ဒီစိန်တုံးကြီးတွေကို သူတယောက်ထဲ အပိုင်စီးချင်လို့ ငါတို့ကို မလာခဲ့ဖို့ တားနေတာလို့
ထင်ပြီး တယောက်က ခုန်ဆင်းသွားပါတယ်။ အောက်လည်း ရောက်ရော အထင်နဲ့ အမြင်တက်တက်စင်အောင် လွဲနေလို့ သူလည်း ပထမလူလိုပဲ
တားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မရပါဘူး ။ တယောက်ပြီး တယောက် ခုန်ဆင်းလာလိုက်တာ နောက်ဆုံး အားလုံးမြွေကိုက် ခံရပြီး အသက်ဆုံးကုန်ပါတယ်။
ဒီဥပမာလေးလိုပါပဲ အိမ်ထောင်ကျပြီးသား လူတွေက အိမ်ထောင်မပြုရသေးတဲ့ လူတွေကို တားတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မပြုရသေးတဲ့ လူတွေကလည်း သူတို့ကျ ယူပြီး ငါတို့ ကို ကျတော့ တားတယ်ဆိုပြီး ပြော ကြ ယူကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ အိမ်ထောင်ဆိုတဲ့
၀ဲဂယက်ကြီးထဲ မှာ ရုန်းရ ကန်ရနဲ့ သံသရာလည်ပြီး ဘ၀ဆုံးကြပါတော့တယ်။
အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဖတ်ဖူးတဲ့ အာရပ် ပုံပြင်လေးတပုဒ် ကို ပြန်ပြီး မျှဝေတာပါ။ ဖတ်ဖူးတဲ့လူတွေလည်း သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။
ဒီပုံပြင်လေးကို ရေးမိတာက လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းလောက် က ငယ်သူငယ်ချင်း အရင်းကြီး တယောက် ညကြီးသန်းခေါင် ဖုန်းဆက် ငိုယိုပြီး ရင်ဖွင့်တာကို နားထောင်ပေးခဲ့ ရလို့ပါ။ အသက်က လည်း ၃၀ ၀န်းကျင်ပါပဲ။ ကလေး ၃ ယောက်ရပါပြီ။ စီးပွားရေးမှာလည်း တော်တော်လေး အခြေချ
မိနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ သူ့အိမ်ထောင်ရေး ကတော့ ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်ပါ။ ကွဲမလိုကွာမလို ကလည်း ၂ ကြိမ်လောက် အကြီးအကျယ် ဖြစ်ဖူးပါတယ်။ အဲဒီနေ့ က သူပြောတာက ဒီယောက်ျားကို ယူမိတဲ့ အတွက် တနေ့ကို အကြိမ်ပေါင်း မြောက်မြားစွာ သူနောင်တရပါတယ်တဲ့ ။ ကျမကတော့ ကြားရဖန်များလို့ ရိုးနေပါပြီ။ သူစိတ်ချမ်းသာအောင် သူပြောသမျှကိုပဲ နားထောင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျမကိုလည်း အိမ်ထောင်မပြုဖို့ ကို သူတို့လင်မယား ရန်ဖြစ်တိုင်း ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ သူနဲ့ဖုန်းပြောပြီး ဒီ အာရပ် ပုံပြင်လေးကို သတိရသွားတာနဲ့
ကဲရွာသူ ရွာသားအပေါင်းတို့ရေ မျက်လုံးတွေ မီးဝင်းဝင်းတောက်ပြီး ကြောက်စရာ မြွေဆိုး ကြီးတွေရှိတဲ့ တွင်းနက်ကြီးထဲ ကို ခုန်ဆင်းတော့မယ်ဆို
ရင်ဖြင့် နားလည်မှု၊ သီးခံမှု ၊ ခွင့်လွှတ်မှု ၊ ကိုယ်ချင်းစာတရား ၊ ဆိုတဲ့ လက်နက်တွေကို စွဲကိုင်ပြီး သတိဝီရိယနဲ့ သာ ဆင်းသွားကြပါနော်။
အဲဒီ ပုံပြင် နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် ပုံပြင်မျိုး ဆူး ပြောဘူးတယ်။
နို့ဆီခွက်ထဲ ခုန်ဆင်းတဲ့ ပုရွက်ဆိတ်တွေ အကြောင်း ရေးထားတာ သဘောတရား နီးစပ်တယ်။
ဒါလည်း version တစ်မျိုးပေါ့ ၊ကောင်းပါတယ်။
သုခလို.ထင်ရင်သုခပေါ. ဒုက္ခလို.ထင်ရင်လည်းဒုက္ခပဲပေါ့ ကိုယ့်စိတ်ခံစားချက်ပေါ်ပဲမူတည်မှာပဲပေါ.။
တွင်းထဲ ဆင်းပြီးမှ တကယ့် အဖိုးတန် စ်ိန်ရိုင်းတုံး တွေ့တဲ့သူတွေလဲ ရှိမှာပါ
ငယ်ငယ်က အကိုကြီးတစ်ယောက်တွေ့ဘူးပါတယ် အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်ပြုတာ မကောင်းဘူး မင်းတို့ မိန်းမမယူကြနဲ့တဲ့ အဲဒီအိမ်ထောင်နဲ့ကွဲပြီး နောက်တစ်ယောက်ထပ်ယူတာပါဘဲ..:)
“နားလည်မှု၊ သီးခံမှု ၊ ခွင့်လွှတ်မှု ၊ ကိုယ်ချင်းစာတရား ၊ ဆိုတဲ့ လက်နက်တွေကို စွဲကိုင်ပြီး သတိဝီရိယနဲ့ သာ ဆင်းသွားကြပါ ” ဆိုတာလေးနဲ့ဆို အဆင်ပြေမှာပါ
အမှတ်မထင် ကြော်ငြာ တစ်စောင်တွေ့လိုက်သည်။
အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာလောကဓမ္မတာပါပဲ။ ကျားဖြစ်ဖြစ် မ ဖြစ်ဖြစ် သီးချိန်တန်သီး ပွင့်ချိန်တန်ပွင့်ပါပဲ။ အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ပြီဆိုရင် လူလွတ်တုန်းကလို ကိုယ့်သဘောချည်းပဲ နေလို့မရပါ။ သူ့သဘော ကိုပါရယူပြီး တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့လိုလာပါပြီ။ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ အဆင်မပြေရင်တော့ ကွဲရင်ကွဲ မကွဲရင်လည်း စိတ်ညစ်စရာအိမ်ထောင်ရေးတခုပါပဲ။ တယောက်နဲ့တယောက် သီးခံနားလည် ခွင့်လွှတ်တတ်ဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ ညှိနှိုင်းလို့အဆင်ပြေသွားရင်တော့ ပျော်ရွှင်စရာ အိမ်ထောင်ရေးဖြစ်လာမှာပါ။
ရည်းစားဘ၀မှာချစ်လွန်းလို့ မိဘတွေခွဲတဲ့ကြားက ခိုးပြေးကြတဲ့လူတွေလည်း ကွဲတာကိုတွေ့ဘူးကြမှာပါ။
အဓိက ကတော့ တယောက်နဲ့တယောက် သီးခံနားလည် ခွင့်လွှတ်တတ်ဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ပြုရင် သူချစ်ကိုရွေးမလား၊ကိုယ်ချစ်ကိုရွေးမလား။ ၂ဘက်စလုံးချစ်ရင်တော့ အဆင်ပြေဆုံးပါပဲ။ ညာချစ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။
တူနှကိုယ်တဲအိုပျက်မှာ.. ထမရည် အတူတူယက်ရ..ယက်ရဆိုတာလည်း.. အယုံအကြည်မရှိဘူး..။
ဘ၀..ဘ၀တွေ..အသစ်ထူထောင်ကြရာမှာ…. ဥင်္ီးနှောက်နဲ့တွဲပြီး.. ချိန်ဆစဉ်းစား..။
နောက်ဆုတ်ဖို့..မဟုတ်ဘူး.. တွေဝေဖို့မဟုတ်ဘူး…။ တွေဝေနေရင်.. ကုန်သွားတဲ့အချိန်တွေပြန်မရဘူး..။
ပျော်ရမဲ့အချိန်တွေ… ပြန်မရဘူး..။ အသက်က… ကိုယ့်ကိုမစောင့်ဘူး..။
အရွယ်ရှိတုန်းကတော့ အင်တင်တင်နဲ့ မယူပဲ အပျိုကြီးပဲလုပ်တော့မလိုလိုနဲ့ (မယူချင်လို့လား.. မရလို့လားတော့ မသိပါဘူး…) အသက်ကြီးလာခါမှ မောင်လေးငယ်ငယ်လေးတွေကို သဘောကျပြီး သားခေါ်လိုက်… မောင်လေးခေါ်လိုက်နဲ့ နွဲ့နေတဲ့ လူတွေကတော့ ပိုဆိုးတယ်….
အရွယ်ရှိတုန်းကတော့ အင်တင်တင်နဲ့ မယူပဲ အပျိုကြီးပဲလုပ်တော့မလိုလိုနဲ့ (မယူချင်လို့လား.. မရလို့လားတော့ မသိပါဘူး…) အသက်ကြီးလာခါမှ မောင်လေးငယ်ငယ်လေးတွေကို သဘောကျပြီး သားခေါ်လိုက်… မောင်လေးခေါ်လိုက်နဲ့ နွဲ့နေတဲ့ လူတွေကတော့ ပိုဆိုးတယ်…. (ယူချင်ပေမယ့်လည်း မရတော့တဲ့ အရွယ်ပေါ့….)
ဒါကတော့ အနောက်တိုင်းအယူအဆလေသူကြီးရယ်၊ ” ၃ကျောင်း ပြောင်းသောသျှင် ၃လင် ပြောင်းသောမိန်းမ” ဟာအနောက်တိုင်းမှာလက်ညှိုးထိုးမလွဲပါဘူး။ ဒီထက်တောင် မကပါဘူး၊ ဒါဟာ တယောက်နဲ့တယောက် သီးခံနားလည် ခွင့်လွှတ်တတ်မှု အားနည်းပြီး ကိုယ့်ဆန္ဒ ကိုရှေ့တန်းတင်တာဦးစားပေးလို့ထင်ပါတယ်။
အိမ်ထောင် ပြု တယ် ဆိုတာ ယောက်ျားတွေ အတွက် လွယ်ပေမယ့် ။ မိန်းမ တွေ အတွက်တော့ မလွယ်ဘူး လို့ ထင်မိတယ် ဗျာ ။
ဆူး ကြားဖူးတာက မောင်ပေ ပြောတာနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်..
ယောကျားတွေက မိန်းမကို ချစ်သူ အဖြစ် ထားရတာ လွယ်သလောက် အတည် လက်ထပ်ဖို့ အတော် စဉ်းစားရတယ်တဲ့ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ တသက်လုံး ရှာကျွှေးရမှာ မိုလို့တဲ့..